SomaliTalk.com » Xisbiga Tiir oo waydiiyay su,aal muhiim ah dhallinyarada Soomaaliyeed.
Dhallinyarooy dalkeenii iyo dadkeenii waxay marayaan xaalad kalaguur ah oo ubaahan in aan qeebteena kaqaadano silooga saaro dhibaatada dalkeena iyo dadkeena. Dhallinyarooy, sidaad wada ogtihiin horusocodka dalkeena waxaa ragaadiyay oo hortaagan kooxo kaladuwan oo wadta qorshayaal ayaga ugaar ah. Kooxahaas oo caado kadhigtay in aynan isku tanaasulin siloo sooceliyo sharefteenii qaranimo ayn lahaanjirnay.
Haddaba waxuu Xisbiga Tiir su,aal weediini dhamaan dhallinyarada Soomaaliyeed su,aashaas oo ah “Maxaa inaga hortaagan in aan isbaddal biloowno, kadibna qabsano hogaanka dalkeena?” sidii dhalinyaradii hore, kadibna aan ciribtirno dhamaan waxyaabaha qaldaadka ah ee kataagan dalkeena sida, qabyaaladda, eexashada, dagaalka, isutanaasul la,aanta, iyo maamul xumada.
Dhamaantiin dhallinyarooy, waxaan idiinku baaqaynaa in aad xubin kanoqotaan Xisbiga Tiir, waayo waa xisbi ay aas aasayn dhalinyaro, waxaana hogaamiya dhalinyaro. Xisbiga Tiir waakacdoon cusub oo raba in uu waxkabadalo siyaasadda dalkeena murugsan mudadadheer. Xisbiga Tiir waxaa loogu talagalay in lagu mideeyo dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed meelkaste iyo meelwalba ooy joogaan. Sidaas darteed waxaan oogu baaqeenaa dhamaan dhalinyaradda Soomaaliyeed in ay kusoobiiraan Xisbiga Tiir.
Macnaha magaca ‘Tiir’ uu xunbaarsanyahay waasidaan: “T” Talowadaag, “I” Israac, “I” Islaanimo, “R” Raxmad).
Xisbiga Tiir waxuu kagaduwan yahay xisbiyada siyaasiga ah ee Soomaalida todobadaan qodon ee hooskuqoran:
1) Waxaa aas aasay dhalinyaro, waxaana hogaamiya dhalinyaro.
2) Waxuu aaminsan yahay in loosameeyo Soomaaliya doowlad dhaxe oo xoogbadan, waxayna kassoo horjeedaan nidaamka fadaraalka.
3) Waxuu rabaa in lagatirtiro dastuurka dalka jagada Ra’iisul Wasaaraha, laguna baddalo siyaassad kudhisan sadex awood: Madaxweena, iyo golahiisa, Baarlamaan iyo afhayayn kooda, Maxkamad sare oo awoodleh.
4) Waxuu diyaar u yahay in uu laxaaltamo dhamaan dadka kashaqeeya danaha umadda Soomaaliyeed iyo dalka.
5) Waxuu aaminsan yahay 4.5 in aan lugu xalinkarin dhibaatada Soomaaliya, loona baahan yahay in lagubaddalo nidaamka Xisbi-Xisbi.
6) Waxuu kudoortaa xubnahiisa aqoontooda, khibraddooda, iyo shaqsigu jaceelka uu uqabo u adeega bulshada Soomaaliyeed
7) Xisbiga Tiir qofna kumadiido in uu xubin kanoqdo sabab laxiriirta heebtiisa,
dadiisa, siyaasaddiisii hore, ama rag iyo dumar midkuuyahay.
Gudoomiyaha Xisbiga Tiir